Vaovao - Ny asa fisorohana sy fanaraha-maso ny valan'aretina dia tsy afaka miala sasatra vetivety！
Ny fivoaran'ny valan'aretina dia atahorana ny "telo mifamatotra sy mifatotra"
Hatramin'ny nanombohan'ny ririnina, ny fivoaran'ny valan'aretina dia niatrika ny loza ateraky ny "telo mifamatotra sy voafintina", ny toe-javatra fisorohana sy ny fifehezana dia nanjary henjana sy sarotra kokoa, ary ny asa dia sarotra sy sarotra.
Ny valan'aretina manerantany dia miteraka risika amin'ny "fiovana miandalana" sy "fiovan'ny mutation". Ny tontolo voajanahary amin'ny ririnina dia nanjary gadra mangatsiaka voajanahary. Ilay coronavirus vaovao dia manana fotoana maharitra kokoa, fivezivezena mahery vaika ary mety atahorana hitera-doza. Ho fanampin'izany, ny fiovan'ny viriosy dia nampitombo ny areti-mifindra sy ny fanafenana, ka niafara tamin'ny fipoahana tanteraka ny onjampeo fahatelo naneran-tany. Nanomboka ny volana desambra 2020, dia nisy tranga vaovao marobe maherin'ny 600000 nanamafy eran'izao tontolo izao, ary maherin'ny 10.000 ny maty vaovao, izay samy avo lenta vaovao taorian'ny nipoahan'ny valan'aretina.
Ny valan'aretina an-trano dia miteraka loza mety hitranga amin'ny valan'aretina mifangaro mifatotra sy apetraka amin'ny toerana misy azy. Nanomboka ny volana desambra 2020, faritany 20 no nitatitra tranga voamarina nafarana vaovao sy areti-mifindra asymptomatika. Hatramin'ny 24:00 tamin'ny 7 Janoary 2021, dia nanamafy tranga 280 tany an-toerana ny fireneko, ka 159 tamin'ireo no nampiana tamin'ny herinandro lasa. Tranga, indrindra ireo valanaretina farany nitranga tao Shijiazhuang City, faritanin'i Hebei. Ny fisehoan'ireny toe-javatra ireny dia mampatsiahy ny faritaninay ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina ary tsy afaka miala sasatra.
Ny toe-javatra fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina dia manolotra ny loza ateraky ny fampifangaroana olona, ​​ny logistika ary ny fiara. Ny faritaninay dia faritany misy mponina mivoaka be. Ny isan'ny mpiasa mpifindra monina sy ny mpianatry ny oniversite dia isan'ireo dimy voalohany ao amin'ny firenena, ary ny ankamaroan'izy ireo dia mikororosy mankany amin'ny Changzhumin mifanila aminy sy ny seranan-tsambo hafa misoroka sy manakana ny aretina. Manakaiky ny Fetiben'ny Lohataona, ary hanao fialantsasatra sy mpifindra monina ny mpianatra. Miaraka amin'ny fiverenan'ny mpandraharaha, sy ny vanim-potoana fivezivezena farany ataon'ny olona avy amin'ny toerana hafa any Jiangxi, ny risika isan-karazany sy ny anton-javatra tsy azo antoka toy ny fivezahan'ny olona, ​​ny fivoriambe ary ny fitsangatsanganana dia mifamatotra sy apetraka, izay mety hitarika amin'ny fiparitahan'ny viriosy ary koa vondron'aretina.
Vaksiny feno ny vahoaka lehibe alohan'ny Fetin'ny Lohataona
Ny ririnina sy ny lohataona dia vanim-potoana tena maika amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina. Ny faritaninay dia mampihatra fepetra isan-karazany amin'ny “fanafarana fiarovana ivelany, ny fiovan'ny fiarovan-tena anatiny”, ary ny fahamalinana, araka ny nanombohany, ny fahazoana ny normalisation sy ny fisorohana ary ny fanaraha-maso ny valanaretina ary manohy manamafy ny fisorohana ny voka-pandroana sy ny valin'ny fifehezana.
Ampiasao tsara ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina ririnina sy lohataona. Hatramin'ny nanombohan'ny ririnina dia nanatontosa fivoriana manokana maromaro ny faritaninay handinihana sy hamehezana ny fisorohana sy ny fifehezana ny ririnina sy ny lohataona lohataona, handrindra sy hamaha ireo olana lehibe, ary hampiroborobo ny ivon-komandin'ny faritany amin'ny ambaratonga rehetra hidirana haingana amin'ny fanjakana ady. Nanomboka ny volana desambra 2020, dia namoaka drafitra miisa 30 nifandray tamin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina ririnina sy lohataona ny provinsinay, ny vaksiny, ny fitsapana asidra niokrika ary ny fananganana toeram-pitsaboana tazo, ny tahirin'ny loharanom-pahasalamana, ny fanazaran-tena maika ary ny fanamafisana ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina mandritra ny taom-baovao ary Fetin'ny Lohataona. Ny drafitra dia ny hiady amin'ny fomba mavitrika sy maharitra amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso amin'ny ririnina sy lohataona. Nandritra ny Andron'ny Taom-baovao dia nandefa ekipan'ny fanaraha-maso 11 ny faritra isan'ny faritany mba hanao fitsidihana an-karihary sy tsy fantatra mba hamongorana tanteraka ireo loza miafina amin'ny fisorohana sy ny fifehezana ny valanaretina.
Mifanaraka tanteraka amin'ny rafitra fisorohana sy fifehezana ataon'ny filankevi-panjakana momba ny fampielezana vaksiny coronavirus vaovao ho an'ny vahoaka lehibe, ny faritaninay dia namolavola drafitra asa na drafitra ho an'ny vaksiny, fanaraha-maso ny fihetsika tsy ara-dalàna, fitsaboana ara-pitsaboana ary fanonerana ireo fihetsika mahery vaika, manazava sokajy roa Mifantoka amin'ny vahoaka vita vaksiny. Ny sokajy voalohany dia olona ahiana tratran'ny aretin-tratra pnemonia vaovao, ao anatin'izany ireo olona mety tratran'ny risika amin'ny asa bebe kokoa, toy ny fitsirihana ny fadin-tseranana an-tsambo sy ny mpiasan'ny quarantine voarohirohy amin'ny entana mangatsiaka nafarana, ny fandefasana sy ny famoahana ny seranan-tsambo, ny fikirakirana, ny fitaterana sy ny hafa mpiasa mifandraika amin'izany, mpiasan'ny fitaterana iraisam-pirenena sy eto an-toerana Personnel, mpiasan'ny seranan-tsambo sisintany, mpiasa ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana izay iharan'ny risika any ivelany; olona atahorana ho voan'ny aretina any ivelany, toy ireo izay mandeha miasa any ivelany na mianatra ho an'ny orinasa na amin'ny tanjona manokana. Ny sokajy faharoa dia ny mpiasa amin'ny toerana manan-danja izay miantoka ny fiasa fototra eo amin'ny fiarahamonina, ao anatin'izany ny mpiantoka filaminana ara-tsosialy, toy ny filaminam-bahoaka, ny afon'afo, ireo mpiasan'ny fiarahamonina ary ireo mpiasa mifandraika amin'izany any amin'ireo masoivohon'ny governemanta sy andrim-panjakana izay manome tolotra mivantana ho an'ny besinimaro; ireo izay mitazona ny famokarana ara-dalàna sy ny asa fiveloman'ny fiaraha-monina Personnel, toy ny rano, herinaratra, fanafanana, arina, mpiasa mifandraika amin'ny etona, sns.; mpiasan'ny asa fanompoana sosialy fototra, toy ny fitaterana, ny logistika, ny fikolokoloana ny zokiolona, ​​ny fidiovana, ny fandevenana ary ny fifandraisana mifandraika amin'ny mpiasa. Ny faritany dia manana famotopotorana lalina momba ny isan'ny olona mila vaksiny amin'ity olona manodidina ny 1,6 tapitrisa ity. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 28 desambra 2020 ity andiany fanaovana vaksiny ity any amin'ny faritany. Amin'izao fotoana izao dia olona 381 400 no vita vaksiny. Ny vaksinin'ny vahoaka manan-danja dia ho vita alohan'ny Fetin'ny Lohataona.
Ekipa finday vonjy taitra miisa 6 avy amin'ny faritany no natsangana
Amin'izao fotoana izao dia misy klinika tazo 223 izay nandalo ny fizahana tany amin'ny faritany, ary ny tahan'ny fanamboarana dia 99,5%. Anisan'izany, ny tahan'ny fanekena ny tobim-pahasalamana tazo any amin'ny hopitaly ankapobeny sy hopitaly areti-mifindra dia 100%. Ny habetsahan'ny andrana asidra niokleika isan'andro dia nitombo ho 338,000, ary ekipa mpiambina asidra nokleary miisa 6 ary ekipa mpanara-maso kalitao 1 no niforona.
Ho fanampin'izany, ny faritaninay dia hiezaka mafy hanao asa tsara amin'ny fakana santionany sy fizahan-toetra ny asidra nokleona coronavirus vaovao avy amina rojo mangatsiaka nafarana, ka isaky ny andiany sy ny sombintsombiny rehetra dia tsy maintsy jerena. Manohiza mampihatra ny traikefa sarobidy sy mahomby azo tamin'ny dingana voalohany, manohy manatsara ny mekanisma fanamorana, manohy manamafy ny "tontolo manokana" sy ny fisorohana, manohy manamafy ny fisorohana ny vondrona sy ny fanaraha-maso ny vondrona, manamafy hatrany ny fototra fisorohana sy fifehezana, ary manao ny ezaka rehetra hisorohana sy hifehezana ny valanaretina ririnina sy lohataona.